Kuboshwe abayisihlanu ngokufa kweZinyane leSilo - Ilanga News
Home Izindaba Kuboshwe abayisihlanu ngokufa kweZinyane leSilo
Kuboshwe abayisihlanu ngokufa kweZinyane leSilo
SEKUBOSHWE abasolwa abayisihlanu abasolwa ngokubulala izinyane leSilo, uMntwana Lethukuthula Zulu (50) (osesithombeni), odlule emhlabeni ngasekuqaleni kwale nyanga eGoli.
Kulaba ababoshiwe kukhona abesifazane abane abaneminyaka ephakathi kuka-27 no-42 ubudala, nowesilisa oneminyaka ewu-32. Baboshwe ePretoria kanti basolwa ngokuthinteka ekufeni koMntwana uLethukuthula.
Okhulumela amaphoyisa eGauteng, uBrigadier Mathapelo Peters, ukuqinisekisile ukuthi kunabasolwa abayisihlanu ababoshwe ngoLwesihlanu ebusuku.
“Laba baboshwe ngemuva kophenyo olunzulu obelwenziwa selokhu kwabikwa ngalesi sigameko eHoneydew, emasontweni amabili edlule.
“Amaphoyisa akwazile ukuhlanganisa ubufakazi obuhlukene obuholele ekutheni kugcine kuvulwa icala lokubulala,” esho.
Uqhube wathi basizwe wukuthola endaweni yesigameko ubufakazi obunzulu obebunganakekile, okwenze kwaba lula ukulandela umkhondo kusebenza abaphenyi abangongoti ophikweni lwe-forensic science.
“Ubufakazi ababutholile endaweni yesigameko yibona obukwaze ukukhombisa ukuthi ngempela kwenzekani, baphinde bamatanisa abasolwa nalesi sigameko,” esho.
UMntwana Lethukuthula uyindodana endala yeSilo uZwelithini kaBhekuzulu nondlunkulu uSibongile, uMaDlamini. Watholakala eshonile emzini wakhe oseNorthworld, eGoli.
UBrigadier Peters uthi abasolwa batholwe benezinye zezimpahla ezantshontshwa ngemuva kokubulawa komntwana.
“Kunezinsolo zokuthi umntwana nalo abesebhizinisini naye bafakelwa izidakamizwa ngaphambi kokuba kuntshontshwe imali nezimpahla ezahlukene. Ziningana izimpahla ezitholwe kulaba ebezintshontshiwe,” esho.
Uqhube wathi uphenyo lusaqhubeka njengoba amaphoyisa esenethemba lokuthi bukhona obunye ubufakazi azobuthola ukuqinisa icala.
Uthi ukuphenywa kabanzi kwaleli cala kungase kukhombise ukuthi ngabe laba basolwa kawekho yini amanye amacala abathinteka kuwona, lapho kufakelwe khona izisulu izidakamizwa zase zibulawa noma zantshontshelwa.
Abasolwa kulindeleke ukuba bavele enkantolo yeMantshi eRandburg namhlanje.
UMntwana uThulani Zulu okhulumela indlunkulu, uthe kabakwazi ukuphawula ngalolu daba ngoba iSilo kasikaziswa ngalokhu.
“Ngokwazi kwami iMbube kayikaziswa ngalesi simo futhi nathi singumndeni kasikaziswa. Ngakho-ke kasikwazi ukukhuluma ngaso,” esho.
Previous articleUshone engagulanga uMshoza
Next articleUtah akayingeni eyezindawo zobumnandi uG65